2010 – Year – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Sherlock (2010) Season3Complete Unicode Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖွဈသရုပျဆောငျတဲ့ Series လေးကိုမကွညျ့ဖူးရငျတောငျကွားဖူးမယျထငျပါတယျ။ သူရဲ့သရုပျဆောငျကောငျးခကျြတှရေယျ ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကောငျးခကျြတှအေရ imdb 9.1 ကို လူပေါငျး ၈သိနျးကြျော Vote ပီးရထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ. မကွညျ့ရသေးတဲ့သူတှကေော ကွညျ့ပီးပီမမှတျမိတော့တဲ့သူတှအေတှကျကော ကွညျကွညျ့လငျလငျလေးပွနျကွညျခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ဘာသာပွနျပီး Channel M-Sub ကနတေငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီ Series ကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ May ဖွဈပါတယျ Zawgyi Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Series လေးကိုမကြည့်ဖူးရင်တောင်ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းချက်တွေရယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းချက်တွေအရ imdb 9.1 ကို လူပေါင်း ၈သိန်းကျော် Vote ပီးရထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကော ကြည့်ပီးပီမမှတ်မိတော့တဲ့သူတွေအတွက်ကော ကြည်ကြည့်လင်လင်လေးပြန်ကြည်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဘာသာပြန်ပီး Channel M-Sub ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May ဖြစ်ပါတယ် Quality - Blu-ray 1080p Episode ...
TMDb: 8.5/10 3055 votes
Sherlock (2010) Season3Complete
Sherlock (2010) Season2Complete Unicode Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖွဈသရုပျဆောငျတဲ့ Series လေးကိုမကွညျ့ဖူးရငျတောငျကွားဖူးမယျထငျပါတယျ။ သူရဲ့သရုပျဆောငျကောငျးခကျြတှရေယျ ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကောငျးခကျြတှအေရ imdb 9.1 ကို လူပေါငျး ၈သိနျးကြျော Vote ပီးရထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ. မကွညျ့ရသေးတဲ့သူတှကေော ကွညျ့ပီးပီမမှတျမိတော့တဲ့သူတှအေတှကျကော ကွညျကွညျ့လငျလငျလေးပွနျကွညျခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ဘာသာပွနျပီး Channel M-Sub ကနတေငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီ Series ကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ May ဖွဈပါတယျ Zawgyi Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Series လေးကိုမကြည့်ဖူးရင်တောင်ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းချက်တွေရယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းချက်တွေအရ imdb 9.1 ကို လူပေါင်း ၈သိန်းကျော် Vote ပီးရထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကော ကြည့်ပီးပီမမှတ်မိတော့တဲ့သူတွေအတွက်ကော ကြည်ကြည့်လင်လင်လေးပြန်ကြည်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဘာသာပြန်ပီး Channel M-Sub ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May ဖြစ်ပါတယ် Quality - Blu-ray 1080p Episode ...
TMDb: 8.5/10 3021 votes
Sherlock (2010) Season2Complete
Sherlock (2010) Season 1 Complete Unicode Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖွဈသရုပျဆောငျတဲ့ Series လေးကိုမကွညျ့ဖူးရငျတောငျကွားဖူးမယျထငျပါတယျ။ သူရဲ့သရုပျဆောငျကောငျးခကျြတှရေယျ ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကောငျးခကျြတှအေရ imdb 9.1 ကို လူပေါငျး ၈သိနျးကြျော Vote ပီးရထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ. မကွညျ့ရသေးတဲ့သူတှကေော ကွညျ့ပီးပီမမှတျမိတော့တဲ့သူတှအေတှကျကော ကွညျကွညျ့လငျလငျလေးပွနျကွညျခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ဘာသာပွနျပီး Channel M-Sub ကနတေငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီ Series ကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ May ဖွဈပါတယျ Zawgyi Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Series လေးကိုမကြည့်ဖူးရင်တောင်ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းချက်တွေရယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းချက်တွေအရ imdb 9.1 ကို လူပေါင်း ၈သိန်းကျော် Vote ပီးရထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကော ကြည့်ပီးပီမမှတ်မိတော့တဲ့သူတွေအတွက်ကော ကြည်ကြည့်လင်လင်လေးပြန်ကြည်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဘာသာပြန်ပီး Channel M-Sub ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May ဖြစ်ပါတယ် Quality - Blu-ray 1080p Episode ...
TMDb: 8.5/10 3003 votes
Spartacus (2010) Season3Complete Unicode Spartacus ရဲ့နောကျဆုံး Season ကို Blu-ray နဲ့ခံစားနိုငျအောငျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Season2မှာ ရှိတဲ့ရနျငွိုးရနျစအကုနျခမြှေုနျးနိုငျခဲ့ပီးနောကျ Spartacus တို့ကြှနျတဈသိုကျ ရောမကို ဘယျလိုဆကျလကျတိုကျခိုကျ ပုနျကနျရငျး အဆုံးသတျသှားမလဲဆိုတာကို ကွညျ့ကွညျ့ကပြါအုံး ဒီ Series ကို ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Rashida ဖွဈပါတယျ Zawgyi Spartacus ရဲ့နောက်ဆုံး Season ကို Blu-ray နဲ့ခံစားနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Season2မှာ ရှိတဲ့ရန်ငြိုးရန်စအကုန်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပီးနောက် Spartacus တို့ကျွန်တစ်သိုက် ရောမကို ဘယ်လိုဆက်လက်တိုက်ခိုက် ပုန်ကန်ရင်း အဆုံးသတ်သွားမလဲဆိုတာကို ကြည့်ကြည့်ကျပါအုံး ဒီ Series ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Rashida ဖြစ်ပါတယ် Quality - Blu-ray 1080p Episode 1 Server M-File Episode2Server M-File Episode3Server M-File Episode4Server M-File Episode5Server M-File Episode6Server M-File Episode ...
TMDb: 7.9/10 1252 votes
Spartacus (2010) Season2Complete Unicode Spartacus Season2ကို Blu-ray Quality နဲ့ ပွနျကွညျ့ခငျြသူတှအေတှကျလာပါပီ။ Batiatus သဆေုံးပီးနောကျမှာတော့ ကြှနျတဈသိုကျဟာ ကပျဗြူဟာကို တိုကျခိုကျပီး ကြှနျတှကေို လှတျလပျဖို့အတှကျ တိုကျပှဲဝငျနတောကို ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီ Series ဟာ ထုံးစံအတိုငျး ပီပီပွငျပွငျ ကှကျကှကျကှငျးကှငျးတှပေါလို့ မိသားစုနဲ့ အတူတူမကွညျ့ပဲ ဒိုငျလြိုလေးကွညျ့သငျ့တဲ့ Series ကောငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီ Season ကို ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Rashida ဖွဈပါတယျ Zawgyi Spartacus Season2ကို Blu-ray Quality နဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက်လာပါပီ။ Batiatus သေဆုံးပီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တစ်သိုက်ဟာ ကပ်ဗျူဟာကို တိုက်ခိုက်ပီး ကျွန်တွေကို လွတ်လပ်ဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Series ဟာ ထုံးစံအတိုင်း ပီပီပြင်ပြင် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေပါလို့ မိသားစုနဲ့ အတူတူမကြည့်ပဲ ဒိုင်လျိုလေးကြည့်သင့်တဲ့ Series ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ...
Spartacus (2010) Season 1 Complete Unicode Spartacus: Blood and Sand | TV Series (2010–2013) သညျ IMDb 7.7/10 TV.com 8.6/10 Rotten Tomatoes 67% Google users 93% ဒါရိုကျတာ Steven S. DeKnight က ဖနျတီးရေးသား ရိုကျကူးထား၍ သရုပျဆောငျ : Andy Whitfield, Lucy Lawless, Manu Bennett တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသော Action, Adventure, Biography ဇာတျလမျးတှဲကောငျး တဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ တငျဆကျလိုကျပါရစေ… ၂၀၁၀ အထိ Season3ခု ထှကျရှိထားပွီး ယခု Season 1 မှာ Episode ၁၃ ခု ပါဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ… Credit Review ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Rashida ဖွဈပါတယျ Zawgyi Spartacus: ...
TMDb: 7.9/10 1170 votes